Talata, Jolay 7, 2009 Alatsinainy 8 Febroary 2016 Douglas Karr
Rehefa niara-niasa tamin'ny mpanjifako taloha tamin'ny fampielezana mailaka mivantana aho, ny lakilen'ny fahombiazana dia ny hafatra mifandraika marobe natolotra imbetsaka. Mampitandrina ny mpanao dokambarotra momba ny fandefasana mailaka indray mandeha aho ary manantena valiny lehibe. Notohizinay hatrany hatrany ny mpanjifa fa ny fahita matetika sy ny maha-zava-dehibe dia lakilen'ny fahombiazana. Na inona na inona fahaizanao manamarina ny mpihaino anao, ny marina dia ny hafatra tokana dia toy ny mametraka hafatra
Tamin'ny lahatsoratra maro nolazaiko momba ny paikady “mahazo, mitazona ary mitombo” ho an'ireo orinasa hampitombo ny orinasany, saingy lafiny iray izay tsy heveriko fa nanoratako mihitsy ny famerenana ireo mpanjifa. Hatramin'ny naha eo amin'ny sehatry ny rindrambaiko ahy dia tsy dia hitako loatra ny fiverenan'ny mpanjifa ka tsy nampidirinay paikady hanandrana hamerina ny mpanjifa. Tsy midika izany fa tsy tokony hatao izany. Ao amin'ny kaonferansa WebTrends Engage aho ary niresaka momba izany ny CEO Jeneraly Alex Yoder
Mandria am-piadanana, Nataline. Raha mbola tsy nolavina tombony ianao, dia voahidy amin'ny fiantohana fiantohana, na naheno olona manana izany - olona tsara vintana ianao! Ny indostrian'ny fiantohana dia iray amin'ireo tombony be indrindra any Etazonia. Tsotra ny matematika, arakaraka ny habetsahan'ny olona avelany ho faty - no tsara kokoa ny tombony. Azontsika atao ve ny manova izany amin'ny Internet sy amin'ny tontolon'ny bilaogy? Azontsika atao ve ny manapoaka baomba fikarohana ara-bakiteny miaraka amin'ny hafatr'i Cigna